Dhoobo Daareed oo hada gaadhay Dhahar & Madaxweyne Denni oo fashil taagan
November 12, 2019 Mahad Jama 5
GAROWE(P-TIMES)- Wararka ka imaanaya degmada Dhahar ee gobolka Sanaag ayaa waxa ay sheegayaan in deegaankaasi uu gaadhay goor dhoweyd gudoomiyihii Baarlamaanka Puntland C/xakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa gudaha degmada Xingalool ee gobolka Sanaag.
Safarka Dhoobo oo ku salaysan wacyi galin iyo kulamo uu la qaadanayo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolkaasi Sanaag ayaa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni uu amar ku siiyey gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo Hayland in ay is hortaag ku sameeyaan safarkiisa.
Mr. Dhoobo ayaa tan iyo shalay qorshaynayey in uu gaadho magaalada Badhan ee gobolka Hayland si uu halkaasi kulamo ugula soo qaato qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaase madaxweyne Denni uu ku amray gudoomiyaha gobolka Hayland in uu hor istaago oo uu baajiyo safarkiisa Badhan, kaas oo ay ka dhalatay xiisad kale.
Gudoomiyaha goboladda Sanaag iyo Hayland oo ka duulaya fudunta dalabka madaxtooyada ayaa marar kala duwan dadaal ku bixiyey in ay baajiyaan safarka Dhoobo, hasa yeeshee waxaa arintaasi si weyn uga cadhooday taageerayaashiisa ku nool gobolka Sanaag kuwaas oo sameeyey kacdoon ka dhan ah maamulka Denni.
C/xakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed ayaa ugu dambeyntii goor dhoweyd gaadhay degmada Dhahar oo kamid ah meelihii istaaga lagaga sameeyey safarkiisa, waxaana uu khilaaf xoogan kala dhaxeeya madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi oo haatan qorshaynaya awood kasta iyo dadaal kasta in uu ku bixiyo baajinta safarada Dhoobo.
Kusoo noqoshada Garowe ayaan la hubin waxa ka dhalan karta, waxaana dadka qaarkood ay aaminsan yihiin in Mr. Denni uu safarka Dhoobo ee Garowe uu hakin karo maadaama haatan uu ku guul daraystay in uu baajiyo safaradiisa goboladda Sanaag iyo Hayland.
Ina maxamed Geylan Dagalkagu waxuu kafog yahay kii dhex maray Darood iyo Hawiye,waxad tahay nin Reer yar ka dhashay oo Ciilqaba Cilkagu Cadaab ayaad kugaliysa horay aya loyiri laan gaab wa Ehelu naar,waxad shaqo ka dhigatay Buun buuninta & Been kashega mamulka puntland,21 sano ayey puntland sosocotey waxayna gartey meel sare,wayna sisocon donta ilahay mahadi,waxad kaqadi karti majirto,waxad ka warqabta puntland waxa ladirirsan ummado farabadan oo xoog leh waxay kaqadi karaan majirto,waxay ahayd in aad kuwas kuqustao,kuwo wax qora oo badan ayaa shaqadan kaga horeyey iyo kuwo hubeysan intaba kuligood wa ku hungoben,qof waliba wa ku ogyahay waxad tahay, waxad lamid tahay shine colay iyo mama malyuun oo sharaftoda siday ulidato kuwas ayad lamekhantahay,waxad puntland yeli karto aya iska yar,shilimada galadu kusiso ayad ismodey in aad wax weentahay,Dahir calasow aya kudhama waxuu markasta udagalama Qabilkoda Adugu Qabilke udagalanta? ileen somaliya qofksta Qabilkisa ayuu kuxiran yahay,Aduguna Qabilkaga aya lugu Addegsanaya.
waxan kale oo ogahay dhalisha laga qoro mesha wad kasarta taas oo ah fuleynimo & kalsoni Daro kuhayasa,hada nin ragga tahay udulqado doda lagula yelanayo,waxan kale oo ku shegaya hadad jojin weydo Dacayada micno Darada ah ee aad masulinta mamulka puntland aad ladabo socoto gor kast fays booga ayanu sogali dona kana canbaren dona,dad badan oo aan ku aqoon ayunu kugu kicin dona si lugu edsiyo gardaradada.
War yaa ilaahay yaqaan war Puntland ma Northa Korea ayay noqotay waa maxay raggaan waaweyn ee inta halkaan soo galay ugu hanjabaya shabakadiisa war heedhaha hadii ay idin dhibeyso in la sheego khaladka iyo edeb darada Deni uus buur ha imaanina meeshaan oo iskaba dhaafa yaa idinku soo qasbayo inaad akhrisataan aada shabakadaha looga nacamleeyo Deni calool kuus iyo aaran jaan war inagaa wax aragnay waaba qasab noogu nacamlee oo waxaan jecelnahay noo sheeg wuxuu ku leeyahay Puntland cadow badan ayay leedahay xaguu joogaa cadowgaa hadalkaasi soo kii Somaliland laga maqli jiray ma aha haatan Puntland ma Somaliland cusub ayay noqotay war ummadii caqligii wuu ka guuray oo wey wada xanuunsanayaan adeerayaloow idinkoo aan caayin una hanjabin ninka shabakada iska leh bil ixsaanakum u daaya meeshiisa oo haba soo gelina hana akhrisanina bal aan aragno inuu idiin yeerto oo kaalaya idin dhaha yaab badanaa.
kuwa qabyaalada jaahiliga ah,aaminsan,waxba laga ma dhaadhicin,karo
Puntland markiihore waxaa loo dhisay,dhibaato jirtay,xiligaasi.
Haddii dalka Soomaaliya naba iyo dowlad si fiican u shaqaysa,laga dhiso
waxaa lago noqon,18 kii gobol.
Maamulka Puntland ee Soomaaliya,kan iyo kii gaas labaduba,waxa at ku
sifoobeen,musumaasuq,iyo boobka hantida awalba yareed ee reer Puntland.
Mudane Deni,waa in laga qaado xilka waayo waxa uu ku tuntay,sharcigii iyo nidaamkii maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya.
Waa in la laalo heshiiskii sharcidarada ku dhisan,ee maamulkii Gaas ku iibiyey
dakadii Bossaso,waa in la joojiyo heshiisyada,la siiyey shrkadaha kaluumayska
ee uu maamulka deni bixiyey.
aaran Jaan,Deni iyo faroole,waxa halis ku yihiin,wada noolaasha iyo degenaasha
Garowe,waa in aysan noqon,meel dad gaar ah,ay sheegtaan,haddii kale waa laga guuri.
Puntland qabilo ayaa dhistay oo ku bahoobay. Qabiiladaana kamid ma ahid. marka orodoo qabiilkaaga xal u hel oo bosaneerada ay ku jiraan ka saar. Puntland talo iyo tusaale kaagama baahna . Gas iyo Deni iyo dhoobo dhaareed, iyo jini-jaan waa reer puntland. Sida aad dhulkaaga iyo qabiilkaaga ula dhaqantid kuma weydiino, waayo wax nooga kidhish ah ayaan jirin. Hadii hantida dunida loo isticmaalo Puntland, Laguna kalatagayo puntland. Meesha lagu kala tagayo waa waa– halhayska somaliweyn– hadii aan isbedel degdeg ah dhicin oo loo hogaansamin dowladnimo federal ah oo puntland leedahay xaquuq xad-dhaaf ah